Shaqaale ka tirsan Laanta Socdaalka oo xabsi lagu xukumay | Somaliska
Labo nin oo ka mid ah shaqaalaha Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ee qeybta Malmö ayaa lagu xukumay xabsi ka dib markii lagu helay musuqmaasuq. Raggaan ayaa la sheegay in ay magangalyo doonka u fududeeyeen in ay sharci Sweden ka helaan, isla markaana qaarkood ay u sameeyeen baasabooro bug ah.
Maxkamada gobolka Skåne ayaa mid ka mid ah ragga ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah, isagoo la sheegay in uu magangalyo doonka ka qaatay lacag gaaraysa 400 000 kr. Waxaa sidoo kale hal sano iyo bar lagu xukumay nin kale oo ay wada shaqaynayeen.
Maxkamada ayaa cadeysay in raggaan ay sharciga u fududeeyeen magangalyo doon ka soo jeeda wadamada Afrika iyo Bariga dhexe. Waxay kale oo u sameeyeen baasaboorada wadanka Bulgaria oo bugg ah si dadkaas aysan uga bixin midowga Yurub. Kiiskaan ayaa socday ilaa sanadkii 2012, isagoo fadeexad weyn ku noqday Laanta Socdalka.
Nin lagu xiray Göteborg.